Wasiirka difaaca oo xaqiijay argagixis lagu diley xerada Turkiga - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wasiirka difaaca oo xaqiijay argagixis lagu diley xerada Turkiga
Waxaa saaka lagu toogtey xerada tababarka ciidamada Somaliyeed ee magaalada Muqdisho argagixis rabay inuu isku qarxiyo. Argagixisada iyo gaalada waxay ka siman yihiin la dagaalanka ciidan xoogan oo dalku leeyahay. Dhiigmiiradka ayaa markiiba la toogtey sida uu xaqiijay wasiirka difaaca Odowaa.
Ninka waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa doonayay in uu isku dhax qarxiyo dhalinyaro wax baratay oo loo qaadanayay Leyli sargaal oo safaf dheer ugu jiray in ay galaan xerada Milatariga ee Turki-Som.
Inta la xaqiijiyay qaraxan ismiidaaminta ah ee ciidamada fashiliyeen waxaa ku dhintay labo qof oo mid ka mid ahaa ardaydii dooneysay leyliga sargaal halka midka kalana uu ahaa qof shacab oo firirka qaraxa ku dhax dilay gurigiisa oo xerada ku dhawaa.
“Qof xiran walxaha qarxa ayaa isku dayay in uu soo dhexgalo dhalinyaro Jaamacaddaha ka soo baxay oo doonayay in ay ciidamada ku soo biiraan, balse ciidamada ayaa ka shakiyay iyagoo toogtay kahor inta aanu soo dhexgalin galin ardayda ” ayuu yiri jeneraal Odowaa.
Xerada milatariga Turkiga ku leeyihiin magaalada Muqdisho ayaa inta badan lagu tababaraa saraakiisha iyo ciidanka kala duwan ee dowlada, waxaana xeradan ku xareesan dhalinyaro badan oo doonaya in ay ka mid noqdaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya.